RangeMe - जडान गर्न को लागी एक उत्तम तरीका? वा क्रेता सावधान? - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक सेप्टेम्बर 25, 2020 डिसेम्बर 16, 2020 जे कालो अर्जेन्टिना थोक र B2B, एशिया थोक र B2B, बंगलादेश थोक र B2B, बेल्जियम थोक र B2B, ब्लग, बेलायत थोक र B2B, बुल्गारिया थोक र B2B, व्यापार, क्यानाडा थोक र B2B, चीन थोक र B2B, चेकोस्लोवाकिया थोक र B2B, डेनमार्क थोक र B2B, DR कांगो थोक र B2B, सम्पादकको पिक, इजिप्ट थोक - B2B, फ्रान्स थोक - B2B, जर्मनी थोक र B2B, ग्लोबल थोक अनलाइन, ग्लोबल विश्व, ग्रीस थोक र B2B, ह Hongक Kong थोक र B2B, हंगेरी थोक र B2B, भारत थोक र B2B, इन्डोनेशिया थोक र B2B, इटाली पसल थोक र B2B, जापान थोक र B2B, केन्या शप ग्लोबल, अरुको अहित गर्ने इच्छा, मेक्सिको थोक र B2B, नाइजेरिया थोक - B2B, पाकिस्तान थोक र B2B, फिलिपिन्स थोक र B2B, रूस थोक र B2B, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, दक्षिण अफ्रीका थोक - B2B, दक्षिण कोरिया थोक र B2B, स्पेन थोक र B2B, थाईल्याण्ड थोक र B2B, टर्की थोक र B2B, युक्रेन थोक र B2B, थोक - B2B, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
थोक बिक्रेताहरु नि: शुल्क खाताको वाचाको साथ प्रलोभनमा छन् जहाँ उनीहरू "१००० भन्दा बढी खरिदकर्ताहरू" सँग जडान गर्न सक्दछन् (यो सत्य हो वा होइन हाम्रो परिप्रेक्ष्यबाट अप्रमाणित छ, तर यस्तो लाग्न सक्छ कि तिनीहरूले १०,०००० भन्दा बढी फ्री क्रेता प्राप्त गरेको हुनसक्दछ)। खाताहरू।)
के तपाईले साईन अप गर्दा महसुस गर्नुहुन्न कि जब ग्राहकहरु तपाईको उत्पादनहरु हेर्न सक्षम छन्, तपाईले तिनीहरुलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्न जबसम्म उनीहरूले तपाईलाई पहिले सन्देश पठाउदैनन्। त्यो जहाँ प्रीमियम सेवा आउँदछ। रेंजमेले $ १1,400०० को वार्षिक शुल्कको लागि अपग्रेड प्रस्ताव गर्दछ। यो ठाडो देखिन्छ, तर नयाँ थोक खरीददारहरूबाट धेरै पैसा कमाउने सम्भावनाले यस रकमलाई चम्प परिवर्तनजस्तो देखिन सक्छ।
RangeMe ले कुनै क्रेडिट सेवा प्रदान गर्दछ, र खरीदहरूमा कुनै कमीशन लिदैन। वास्तवमा त्यहाँ तिनीहरूको प्लेटफर्ममा बेच्ने कुनै तरिका छैन, सबै कुरा खरीददारहरू देखाउन प्रदर्शनको रूपमा सेट अप गरिएको छ, धेरै ट्रेड शो जस्तै। केवल समस्या यो छ, एक ट्रेडशो भन्दा फरक, तपाईं देखा परेका खरीदारहरूसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्न, तिनीहरूले अझै तपाईंलाई सम्पर्क गर्नुपर्दछ।
उनीहरूको एक बिक्री एजेन्ट, केभिन (एक गोप्य कलमा हामी गोपनीयता प्रयोजनका लागि उसको अन्तिम नाम प्रयोग गर्दैनौं), हामीले उनीहरूको सेवाहरूको माध्यमबाट जानको लागि र उनीहरूले कसरी मद्दत गर्न सक्दछौं भनेर २०- 20० मिनेट लिएका थियौं। हामीले यो एक साझेदार कम्पनीसँग संयोजनमा गरेका थियौं जुन समयको लागि अज्ञात रहनको लागि चुनिएको छ। बिक्री कल तपाईंको आधारभूत उच्च दबावको कल थियो, केहि सुविधाहरू अवश्य बढाइएको थियो, कमसेकम उनीहरूको मद्दत, प्रायः बिक्री प्रतिनिधिहरू जस्तै। यद्यपि हामीले यसबारे स्पष्ट सोचेका थिएनौं।
हाम्रो पार्टनर कम्पनीमा रुचि राख्ने मुख्य सुविधाहरूमध्ये एउटा हो कि ग्राहकहरू समक्ष पुग्न र ग्राहकहरूलाई उनीहरूको उत्पादन परिचय दिन सक्ने क्षमता। केभिन उनीहरूसँग १०,००० भन्दा बढी खरीददारहरू कसरी थिए भन्ने बारे मा गए, र तिनीहरूलाई सन्देश पठाउनको निम्ति मात्र तरिका प्रीमियम सेवामा अपग्रेडको लागि भुक्तान गर्नु थियो। हाम्रो साथीहरूले अगस्टको अन्त्य हुनु अघि नै दर्ता गरेमा उनले $ 10,000। मा छुट पनि प्रस्ताव गरे।
महत्वपूर्ण जcture्गललाई ती १०,००० खरिदकर्ताहरूको बारेमा सोधेको थियो, हाम्रो पार्टनरले खाली खाली पोइन्ट - "के म ती उत्पादनहरू पठाउनका लागि ती १०,००० ग्राहकलाई सीधा सन्देश पठाउन सक्षम हुनेछु?" कुनै हिचकिचाहट बिना उसले भन्यो हो! "हो तपाईं सिधा सन्देश पठाउन सक्षम हुनुहुनेछ र सबमिशन र नमूना पठाउन पनि तिनीहरू सबैलाई।"
ठिकै यो मूल्यमा ठूलो सम्झौताको रूपमा देखिन्थ्यो - १००० + खरिददारहरूको सूची जुन हाम्रा साझेदारहरूले उनीहरूको अगाडि उनीहरूको उत्पादनहरू लिन सक्थे, जो सक्रिय रूपमा सम्भावित नयाँ उत्पादनहरूको खोजी गरिरहेका थिए। फलस्वरूप, यो सत्यबाट टाढा हुन सक्दैन।
छूट मूल्यमा सेवा अपग्रेड पछि, हाम्रा साथीहरू (सुविधाका लागि उनीहरूलाई एक्स भन्छन्) चकित भए कि उनीहरूसँग कुनै थप नयाँ सम्पर्क विकल्पहरू उपलब्ध थिएनन्। उनीहरूले सबमिशन पृष्ठ जाँच गरे, जसमा हाल ११,००० भन्दा बढी खरीददारहरूमध्ये कम्तिमा companies companies कम्पनीहरू थिए, जसले सक्रिय रूपमा सबमिशनहरू मागिरहेका थिए, र उनीहरूसँग कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ग्राहक सेवाबाट आएको प्रतिक्रियाको प्रतिक्षा गर्दा उनीहरूले सुरूवात गर्नका लागि प्रयास गर्ने प्रयास गरे। वास्तवमा ती कम्पनीहरूमा पुग्न।
सबै बाहेक or वा companies कम्पनीहरूले मात्र तिनीहरूलाई छोटो3वर्ण सन्देश पठाउन अनुमति दियो। त्यहाँ कुनै एकल ठेगाना थिएन जुन कुनै नमूना पठाउन ठेगाना थियो, वा कुनै पनि प्रकारको सम्पर्क जानकारी। सबमिशन पठाएको एक घण्टा पछि (र हो जसमा character०० क्यारेक्टर सन्देश क्राफ्ट गर्न समावेश गरिएको थियो) तिनीहरू भइसकेका थिए, र जवाफको लागि प्रतिक्षा गर्दै।
एक दिन लाग्यो समर्थन टोली उनीहरुलाई फिर्ता लिन, किनकि केभिनले उनीहरुको कल फिर्ता गर्न परेशान गर्न सकेनन, र उनीहरुको प्रतिक्रिया सरल थियो: "तपाईले ती क्रेताहरु लाई पुग्न सक्नुहुन्न, यो हामी प्रस्ताव गर्दैनौं। तपाईं ती companies companies कम्पनीहरूमा मात्र सबमिट गर्न सक्नुहुनेछ र यो हो। कठिन भाग्य। "
पछि गएर उनीहरूलाई के भनिएको थियो भनेर पछि फर्किए पछि, हामीले निर्णय गर्यौं कि यो पैसाको केही मोलको छैन र फिर्ताको लागि भनियो। यो सरल हुनुपर्दछ, बिक्री प्रतिनिधि झूट बोले, र तिनीहरूले फिर्ता फिर्ता प्रस्ताव गर्नुपर्छ? फेरि अनुमान गर्नुहोस् - तिनीहरूले यसलाई अस्वीकार गरे।
दोस्रो पटक फिर्ताको लागि बुझाउनु भए पछि, र उनीहरूको प्रतिनिधिले भनेको भनेको कुराको विस्तृत विवरण दिए पछि पनि उनीहरूले फिर्ती फिर्ता लिन अस्वीकार गरे। लगभग $ १०० पहुँचको लागि 1,000 ​​companies कम्पनीहरूलाई छोटो character०० क्यारेक्टर सन्देश पठाउन र एक वर्षभरको लागि फेरि सम्पर्क गर्न असमर्थता जब सम्म तपाइँ तपाइँको बाँकी तिर्ने छैन।
यस किसिमको छल र आक्रोश आजको संसारमा प्राय: प्राय: जसो चल्दै जान्छ। मानिसहरू असन्तुष्ट भएका छन् कि उनीहरू आफ्ना ग्राहकहरूसँग झूट बोल्न सक्छन् र उनीहरूको पैसा राख्न सक्छन्। यस प्रकारको धोखाधडी बन्द गर्नुपर्दछ। कम्पनीहरूलाई उनीहरूको बिक्री प्रतिनिधिहरू द्वारा भनिएको झूटा लागि जिम्मेवार हुन अनिवार्य छ। यो रेंजमे जस्ता कम्पनीहरूले स small्घर्ष गर्दै आएका साना व्यवसायहरूको हातबाट पैसा लिने र झूट बोलेको हेरफेर गर्न पूर्णतया अनैतिक छ, र जब उनीहरू आफ्ना प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्न असफल हुन्छन्, पैसा राख्छन् र हिंड्छन्, पूरा समय हाँस्दछन्।
क्रेता होशियार रहनुहोस् - RangeMe एक कम्पनी हैन तपाइँसँग सम्बन्धित हुन। हामी सुझाव दिन्छौं कि यदि तपाई थोक बेच्ने तरीका खोज्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसले तपाईको पैसा लिने छैन र चलाउँदैन, अर्को साईटलाई चलाएर हेर्नुहोस्। Shoptheglobe.co त्यो उनीहरूको व्यवहारमा नैतिक हो, र जसले केहि पनि लागि सदस्यता शुल्क लिदैन। तिनीहरू केवल कमिसन लिन्छन्, त्यसैले तिनीहरू केवल तपाईंले भुक्तानी गर्दा पाउनुहुनेछ, र सब भन्दा राम्रो तिनीहरूलाई पहिलो हप्ता रुचि थियो!
सांप्रदायिक समाचार धोखाधडी RangeMe फ्रड थोक
म तथ्य आधारित लेख लेख्न को लागी प्रयास गर्दछ जुन अधिक व्यक्तिले गर्दैन। यस संसारलाई सुधार गर्नका लागि दुबै कर्पोरेट र सरकार दुबै माफ्यान्स सहित। यदि तपाईंसँग नैतिक असफलताको बारेमा नेतृत्व छ भने कृपया मेरो लेख वा मेरो धेरै टिप्पणीहरूमा टिप्पणी गर्नुहोस्।
आईआरएसले साना व्यवसाय हप्ताको समयमा गृह कार्यालय कटौती नियमहरूको करदाताहरूलाई सम्झाउँदछ
यदि तपाइँ तपाइँको ट्याटू शपमा Numbify कैरी गर्दै हुनुहुन्न भने, तपाइँ पैसा गुमाउँदै हुनुहुन्छ !!!